Galaxy Fold adịghị njikere ịmalite, dị ka onye isi Samsung | Androidsis
Samsung kwetara na Galaxy Fold adịghị njikere ịmalite
Ogige Galaxy enweghị ezigbo ụzọ mgbe ị rutere n'ahịa. Samsung amanye aka mee usoro mgbanwe na ekwentị, nke mere na ọ ga-enwe ike ịmepe ya n'ahịa n'oge na-adịghị anya. Ọ bụ ezie na n'oge ahụ enweghị ụbọchị, ọ bụ ezie na ọ dị ka akpatre ọ bụ n'ezie ldị njikere ịmalite.
Ọtụtụ ndị were ya na ọfụma na a tụbara ekwentị na-akwadoghị. Nke a bụ ihe Samsung kwadoro ugbu a. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwetara na nyere iwu ka ịmalite Galaxy Fold enweghị ekwentị na-adị njikere n'ezie ịba n'ahịa.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, nke doro anya na ọ bụ mmejọ. N'otu aka ahụ, Samsung na-achịkwa ịchịkwa ekwentị foldable. Tụkwasị na nke ahụ, itinye ego na nyocha na mmepe na Fold Galaxy abụwo nnukwu. Yabụ enwere ụfọdụ ọsọ iji nweta ya na ahịa ozugbo enwere ike.
Ọ bụ ezie na Samsung CEO kwupụtara n’ụzọ doro anya mmejọ ya n’ajụjụ ọnụ. N'ime ya, ọ na-ekwu na ya nyere ekwentị ahụ ọkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tupu ya akwadebe. Mkpebi nke mere ka ụlọ ọrụ hapụ ụfọdụ ala n'ọhịa nke ekwentị mpịachi. Ọ bụ ezie na ha na-achọ ugbu a iji weghachite ya. Luckily, ha enweela ike ịchọpụta chinchi niile na ekwentị.
Ha bụ ugbu a na usoro nke idozi niile chinchi na Galaxy Fold. Achọpụtala ihe niile, mana ọ dị ka edobeghi ha niile. Ma ọ dịkarịa ala, nke a pụtara. Ọ bụ ezie na ekwuru na ekwentị ahụ ga-abata n'August, n'ihi ya, anyị amaghị n'ezie ma ọ bụrụ na enwere ihe idozi ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọ bụ ezie na CEO n'onwe ya na-ajụ ndị ọrụ oge ụfọdụ. Ya mere, o yiri ka anyị ga-echere obere oge ruo mgbe a ga-ebupụta Ogige Ahịa a n'ahịa. Ọ ka mma ichere ma nwee ekwentị zuru oke, ka ọdịda ghara ime ọzọ. Samsung amaworị na a gaghị ekwe ka emehie na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung kwetara na Galaxy Fold adịghị njikere ịmalite
Redmi K20 usoro ire ahịa gafere XNUMX nde nkeji na ọnwa mbụ ya
A na-emepụta Galaxy A80 na Spain